DEG-DEG: Wakiilka Pual Pogba Ee Mino Raiola Oo Warkii Ugu Waynaa Ee Mustaqbalka Pogba Ee Man United Ku Dhawaaqay. - Gool24.Net
DEG-DEG: Wakiilka Pual Pogba Ee Mino Raiola Oo Warkii Ugu Waynaa Ee Mustaqbalka Pogba Ee Man United Ku Dhawaaqay.
Wakiilka Pual Pogba ee Mino Raiola ayaa warkii ugu waynaa ka sheegay mustaqbalka xidiga reer France ee kooxda Man United wuxuuna si wayn uga farxiyay jamaahiirta Old Trafford.
Mino Raiola ayaa si rasmi ah u shaaciyay in Pual Pogba uu sii joogi doono Manchester United isla markaana uu boqolkiiba boqol qayb ka yahay qorshaha xili ciyaareedka cusub.
Mino Raiola ayaa shaaciyay in si deg deg ah ay Man United u wada bilaabayaan wada hadalka heshiis cusub looga saxiixayo Pogba taas oo gabi ahaanba meesha ka saari doonta mugdigii waqtiga dheer ku soo jiray mustaqbalka xidiga reer France.
Pual Pogba oo u waramayay wariyaha Sky Sports ee Gianluca Di Marzio ayaa si cad u xaqiijiyay in mustaqbalka Pual Pogba uu hadda yaalo Man United oo aanu jirin wax dhibaato ah oo heshiiska cusub hor joogsanaysaa.
Xagaagii la soo dhaafay Pual Pogba ayaa ka xadhko xidhay Old Trafford wuxuuna warbaahinta mariyay waraysiyo uu ku doonayay in uu Real Madrid ku biiro laakiin hadda wax walba way isbadaleen.
Wakiilka Pual Pogba ee Mino Raiola oo ka hadlaya mustaqbalka xidigan ayaa yidhi: “Pogba waa ciayartoy muhiim u ah Manchester United, waxay leeyihiin mashruuc muhiim ah isla markaana boqolkiiba boqol ayuu isagu qayb ka yahay”.
Mino Raiola ayaa si rasmi ah u sheegay in Man United ayna xagaagan aqbali doonin wax dalab ah oo lagu doonayo Pogba wuxuuna yidhi: “Man United ma aqbali doonto xagaagan dalab ay ku iibinayso Pogba”.
Dhinaca kale Mino Raiola ayaa ku dhawaaqay in si deg deg ah ay Man United wada hadal heshiis kordhinta Pogba ah u bilaabi doonaan isla markaana aanu wax culays ahi jirin wuxuuna yidhi: “Waxaanu doonaynaa in aanu si deg deg ah heshiis cusub uga wada hadalno, ma jiro wax cadaadis ahi”.
Mino Raiola ayaa si wayn uga farxiyay jamaahiirta Manchester United ee ka walwalsanaa in is mari waagii Pogba iyo maamulka kooxdoodu uu markale soo laabto laakiin waxay hadda heleen war ay ku faraxeen.
Paul Pogba iyo Bruno Fernandes ayaa ah labada xidig ee uu Solskjaer si dhab ah ugu xisaabtamayo in xili ciyaareedka cusub ay hogaamiyaan isbadalka uu doonayo in uu ka sii sameeyo Old Trafford.
Warka Mino Raiola ayaa soo baxay xili la sii ogaay in Real Madrid oo deganaansho la’aan ku abuurtay Pogba ayna xagaagan wax lacago badan ah suuqa ku kharash garayn doonin.
Sidoo kale waxaa hoos u dhacay xiisihii kooxaha Juventus iyo PSG u hayeen Pual Pogba sababo la xidhiidha dhaqaalo xumada uu keenay fayraska karoona ee taageero la’aanta lagu soo ciyaarayay.
Si kastaba ha ahaatee, Man United ayaa hadda filaysa in Paul Pogba uu saxiixi doono heshiis waqti dheer kooxdooda ku sii hayn doona isla markaana ay ka bixi doonaan xaaladii walwalka ee mustaqbalka xidigan.